Hababka Unugyada Half
Laabi Laabi Karo ee La Qaadan Karo Qorraxda
Saamaynta labada kaarboon ee Shiinaha iyo siyaasadaha xakamaynta laba-geesoodka ah ee baahida sawir-maskaxeed ee qorraxda
Warshado la ildaran koronto la qoondeeyey ayaa gacan ka geysan kara kor u kaca nidaamyada qorraxda ee goobta, iyo dhaqdhaqaaqyadii dhawaa ee lagu amrayay dib u habeynta PV dhismayaasha jira ayaa sidoo kale kor u qaadi kara suuqa, sida falanqeeye Frank Haugwitz uu sharaxay. Waxaa jiray tallaabooyin kala duwan oo ay qaadeen Shiinaha oo...
CODSIGA LAYLKA ILAALINTA SOLAR EE BADBAADINTA TAMARTA, YAREYNTA CIIDANKA IYO HORUMARINTA DHEXDHEXAADINTA KAARBON
Si loo gaaro yoolka ugu sarreeya ee kaarboonka iyo dhexdhexaadnimada kaarboonka, horumarinta tamarta cusub ayaa loo dardargeliyay hab dhan walba ah. Dhawaan, Maamulka Tamarta Qaranka ayaa soo saaray "Ogaysiis ku saabsan Horumarinta iyo Dhismaha Korontada Dabaysha iyo Sawir-qaadista Korantada ee 2 ...
Dayactirka Jidka Cadceedda
by admin 21-06-19
Solar panels waa qaali in lagu dayactiro sababtoo ah uma baahnid inaad qorto khabiir ku takhasusay, inta badan shaqada adiga ayaa qaban kartaa. Ma ka werwersantahay dayactirka laydhkaaga cadceedda? Hagaag, sii akhriso si aad u ogaato aasaaska dayactirka iftiinka waddada cadceedda. ...
KU dhawaad ​​Seddex meelood labo meel dadka ka shaqeeya wershadaha cadceedu waxay filayaan inay arkaan kobaca iibka laba-labambar ee sanadkan.
Taasi waa sida lagu sheegay sahan dhowaan uu daabacay ururka ganacsiga Global Solar Council (GSC), kaas oo lagu ogaaday in 64% gudaha warshadaha, oo ay ku jiraan ganacsiyada qoraxda iyo ururada cadceedda ee qaranka iyo gobollada, ay filayaan kobaca noocaas ah sanadka 2021, koror yar. .
LIFE SOLAR – - Farqiga u dhexeeya MONOCRYSTALLINE SOLAR PANEL IYO POLYCRYSTALLINE
Dabaqyada qorraxda waxay u qaybsan yihiin hal crystal, polycrystalline iyo silicon amorphous. Badi muraayadaha qorraxda hadda waxay isticmaalaan hal kiristaalo iyo walxo polycrystalline ah. 1. Farqiga u dhexeeya hal saxan crystal ma...
Qorraxda NOLOSHA - - NIDAAMKA Bamka biyaha ee sawir-qaadista, Keydinta tamarta, dhimista kharashka iyo ilaalinta deegaanka
Iyada oo la dardargelinayo is-dhexgalka dhaqaalaha adduunka, tirada dadka adduunka iyo miisaanka dhaqaale ayaa sii kordhaya. Arrimaha cuntada, ilaalinta biyaha beeraha iyo arrimaha baahida tamarta ayaa caqabado ba'an ku ah badbaadada iyo horumarka aadanaha iyo nidaamka deegaanka dabiiciga ah. Dadaalka t...
Dhismaha 36, ​​Hongqiao Xinyuan, Degmada Chongchuan, Nantong City, Shiinaha